TTO ပရင်တာထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများနှင့်အတူ China Standard rewinder | Baiyi
TTO ပရင်တာနှင့်အတူစံ rewinder
ထုတ်ကုန်အမည်: TTO ပရင်တာနှင့်အတူစံ rewinder
စံပြ BY-SR500-TTO / BY-SR500-UV ကို / BY-HR450-UV
အသွင်အပြင်:ဒါဟာတံဆိပ်ကပ်ခြင်းနှင့်ထုပ်ပိုးရုပ်ရှင်လိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးများအတွက်တီထွင်သည်။ အစဉ်အလာတံဆိပ်ပုံနှိပ်ခြင်းနည်းပညာလိုအပ်ချက်နှင့်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းဆိုင်ရာအမှတ်အသားအရကျွန်ုပ်တို့သည်“ လျှောက်လွှာအမြောက်အများရှိသောစက်တစ်လုံးကိုရရှိရန်ကြိုးစားသည်။ ၎င်းသည်ရုပ်ရှင်နောက်ပြန်လှည့်ခြင်းနှင့်တံဆိပ်ပြန်ခြင်းများအတွက်သင့်လျော်သည်” ။ "လုပ်ဆောင်ချက်တော်တော်များများရှိတဲ့စက်တစ်လုံး၊ TTO ပရင်တာနှင့်ခရမ်းလွန်ပုံနှိပ်ခြင်းစနစ်အတွက်လည်းသင့်တော်သည်။ " "စက်ပုံစံပေါ်တွင်မော်ဂျူလာ၊ မော်ဂျူလာအများရှိသည့်စက်တစ်လုံး၊ သုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့၏ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်အရမော်ဂျူးရွေးချယ်မှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်" ၎င်းသည်လိပ်အတွက်လိပ်စာအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုနှင့်လိပ်၏သင်္ကေတဖြင့်ရုပ်ရှင်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ဤအသိဉာဏ်ရှိသောပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်တွန်းလှန်ခြင်းစီးရီးသည်လက်ရှိစျေးကွက်၏လိုအပ်ချက်အရလိပ်၊ လိပ်၊ စလိပ်၊ စလိပ်တံဆိပ်စသည်တို့အတွက်တံဆိပ်များအတွက်ဖြစ်သည်။ Roll's rewinding & production feature နှင့်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့် coding နည်းပညာများပါ ၀ င်သည်။ အမျိုးမျိုးသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်စက်တစ်လုံးကိုအသုံးပြုခြင်းသည်၎င်းသည် TTO အပူပရင်တာနှင့်ခရမ်းလွန်ပရင်တာစသည်ဖြင့်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ “ လုပ်ဆောင်ချက်များစွာရှိသောစက်တစ်လုံး” သည်စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးအတွက်နည်းပညာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ “ အမျိုးမျိုးသောစက်တစ်ခု” - စဉ်ဆက်မပြတ် (သို့) ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းကျွေးမွေးခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ လူတို့သည်ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်နှင့်အညီဖွဲ့စည်းမှုကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဒါဟာလိပ်အတွက်ပစ္စည်းအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်စက်မှုလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နှင့်နည်းပညာအင်္ဂါရပ်အရ, ဒါဟာစံ TTO အပူပုံနှိပ်ခြင်း rewinder, စံခရမ်းလွန်ပုံနှိပ် rewinder, မြန်နှုန်းမြင့် rewinder ရှိပါတယ်။ လူများသည် coding လိုအပ်ချက်အရ CIJ သို့မဟုတ် TIJ ပရင်တာ၊ လေဆာပရင်တာ၊ TTO အပူပရင်တာနှင့် UV ပုံနှိပ်ခြင်းစနစ်ကိုသုံးရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
"စံ TTO အပူပုံနှိပ်ခြင်းပြန်လှည့်ခြင်း" ကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်သည့်အပူပုံနှိပ်ခြင်းနည်းပညာအရ TTO ပုံနှိပ်စက်နှင့်တပ်ဆင်ထားသောကွင်းခတ်တပ်ဆင်ထားသည်။ HMI သည် ၇ လက်မရောင်စုံ touch screen၊ PLC နှင့် micro PC များကိုထိန်းချုပ်သည်။ ရုပ်ရှင်များနှင့်တံဆိပ်များ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ထူးခြားမှုကွာခြားချက်အရလူတို့သည် HMI တွင်အလုပ်လုပ်သော parameter ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်၊ အလုပ်လုပ်နေသောအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးအချက်ပေးနိုင်သည်။ system ၏ linear un-winding နှင့်အကွေ့အကောက်များသောတင်းမာမှု၊ အလျင်အမြန် / နှေးကွေးသောရုတ်သိမ်းခြင်း၊ ပိတ်ခြင်းမှကာကွယ်ခြင်း၊ အဖြူရောင်အမှတ်အသားသို့မဟုတ်ရောင်စုံအမှတ်အသား၏ခလုတ်ရှာဖွေခြင်း၊
“ standard UV printing rewinder” ဖွံ့ဖြိုးမှုသည် UV ပုံနှိပ်ခြင်းစနစ်၏နည်းပညာအင်္ဂါရပ်နှင့်အညီဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပုံနှိပ်ခြင်းစနစ်၊ ၇ လက်မအရွယ် touch screen, PLC နှင့် micro PC များကိုထိန်းချုပ်သည်။ ရုပ်ရှင်များနှင့်တံဆိပ်များ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ထူးခြားမှုကွာခြားချက်အရလူတို့သည် HMI တွင်အလုပ်လုပ်သော parameter ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်၊ အလုပ်လုပ်နေသောအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးအချက်ပေးနိုင်သည်။ system ၏ linear un-winding နှင့်အကွေ့အကောက်များသောတင်းမာမှု၊ အလျင်အမြန် / နှေးကွေးသောရုတ်သိမ်းခြင်း၊ ပိတ်ခြင်းမှကာကွယ်ခြင်း၊ အဖြူရောင်အမှတ်အသားသို့မဟုတ်ရောင်စုံအမှတ်အသား၏ခလုတ်ရှာဖွေခြင်း၊ “ မြန်နှုန်းမြင့်ပြန်လှည့်ခြင်း” သည်ပုံမှန်ပြန်လှည့်စက်ကိုအခြေခံသည်။ အမြန်နှုန်းသည်အလွန်တိုးတက်လာပြီးတည်ငြိမ်သောအမြန်နှုန်းမှာ ၁၀၀ မီတာ / မိနစ်ဖြစ်သည်။ ကအထူးအခါသမယကပိုင်ဆိုင်သည်။
optional function ကို: "အလိုအလျောက်ဖြေရှင်းပေးရန်စနစ်"
1. စံ TTO အပူပုံနှိပ် rewinder
2. စံခရမ်းလွန်ပုံနှိပ် rewinder
3. မြင့်မားသောမြန်နှုန်း rewinder
အေအတိုင်းအတာ: L ကို * W * H ကို = 1200 * 1100 * 1200mm
C. ဗို့အား: 220VAC 50 / 60HZ
power ပါဝါ: အကြောင်းကို 2KW
အီးထိရောက်မှု - 200pcs / min ခန့် (ထုတ်ကုန် ၁၀၀mm ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ပုံနှိပ်ခြင်းနှုန်းနှင့်ကြိမ်နှုန်းနှင့်လည်းဆက်စပ်သည်။ )
အက်ဖ်။ ခါးပတ်အရှိန်နှုန်း: 2-60m / min (အစဉ်မပြတ်ညှိနှိုင်းမှု)
G. ရရှိနိုင်သည့်ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား - ပစ္စည်းအကျယ် - ၃၀-၄၈၀ မီလီမီတာ၊ အမြင့်ဆုံးမီတာ ၅၀၀ မီလီမီတာ၊ ပစ္စည်း 50KG များအတွက်အများဆုံးအလေးချိန်
အိပ်ချ်ဖြေရှင်းပေးရန် - မူဘောင်ပြင်ခြင်း (optional function) နှင့်တိကျမှုသည် ၀.၂၅ မီလီမီတာဖြစ်သည်
ဗြဲမော်တာ: servo မော်တာ
ဂျေရရှိနိုင်သည့်ထုတ်ကုန်: BOPP, CPP, PET, PE, စက္ကူ, ပေါင်းစပ်ရုပ်ရှင်, အလူမီနီယံရုပ်ရှင်စသည်တို့ကိုလိပ်အတွက်ပစ္စည်း။
အယ်လ်စုဆောင်းခြင်းတင်းမာမှုထိန်းချုပ်မှု: linear တင်းမာမှုထိန်းချုပ်မှု
အမ်အတွင်းအချင်း ၃ လက်မ (၇၆ မီလီမီတာ)
N. စက်ကိုယ်ထည် - သံမဏိသို့မဟုတ်ကာဗွန်သံမဏိဖြင့်ဆေးသုတ်ခြင်း (အရောင်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်)
O. တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်း - ကြမ်းပြင် - တပ်ဆင်ခြင်း၊ အော့ဖ်လိုင်း။
P. optional ကို function ကို: အလိုအလျောက်စနစ်ကဖြေရှင်းပေးရန်။
အေအတိုင်းအတာ: L ကို * W * H ကို = 1600 * 1150 * 1070mm
အီးထိရောက်မှု - ၁၀၀ မှ ၁၀၀၀ အထိ / မိနစ်ခန့် (ထုတ်ကုန် ၁၀၀ မီလီမီတာကိုကိုးကားရန်၊ ပုံနှိပ်ခြင်းမြန်နှုန်းနှင့်ကြိမ်နှုန်းနှင့်လည်းဆက်စပ်သည်)
အက်ဖ်။ ခါးပတ်အရှိန်နှုန်း: 10-100m / min (စဉ်ဆက်မပြတ်ညှိနှိုင်းမှု)
G. ရရှိနိုင်သည့်ထုတ်ကုန် - အကျယ် ၃၀ - ၄၄၀mm၊ အများဆုံးပစ္စည်းအချင်း ၄၅၀ မီလီမီတာ၊ max ကိုပစ္စည်းအလေးချိန် 50KG
K. တင်းမာမှုထိန်းချုပ်မှုကိုလွှတ်ပေးသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်တင်းမာမှုကိုထိန်းချုပ်သည်
Feeding & TTO အပူပုံနှိပ်ခြင်းတစ်ခုလုံး
KN95 / KF94 မျက်နှာဖုံးအစာကျွေးခြင်းနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းစနစ် ...